Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2010 (9)
Q and A September 2010 (9)
1. ယောက်ျားလေးနဲ့ တူတူနေပြီး
2. ကောင်မလေးနဲ့ အတူနေတုံးက
3. ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခဲ့စဉ်တုန်းက
4. ပြီးခဲ့တဲ့ August လ7ရက်နေ့မှာ ရာသီ လာပါတယ်
5. မကြာခဏ ချောင်းဆိုးတယ်
Q: ယောက်ျားလေးနဲ့ တူတူနေပြီး နောက်လတွေမှာ ၃-၄ လ လောက် ရာသီ ပုံမှန်လာခဲ့ပါတယ်။ အခု ၅ လမြောက် ရာသီလာရမဲ့ ရက်ဝန်းကျင်မှာ ထိန်နေတာဟာ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်ပါသလား သိပါရစေဆရာ။ အတူနေချိန်မှာ Condom လည်းသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
A: လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ရာသီလာရင် အဲဒီ လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန် မရပါ။ နောက်တလမှာ ဆက်ဆံရင် နောက်တလ အတွက် စဉ်းစားရမယ်။ ရာသီလာပြီး လုံးဝ မဆက်ဆံဘဲ၊ နောက်ကျမှ ရာသီထိန်တာက အရင် ဆက်ဆံတာနဲ့ မဆိုင်တော့ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) သုံးရင် ၉၈% ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ပါ။
27 Sep 10, 01:07
Q: ကျွန်တော် ကောင်မလေးနဲ့ အတူနေတုံးက ပထမရက်မှာ အစွပ်မသုံးခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ရက်မှ အစွပ်ကို သုံးတာပါ။ အခုသူက ဆီးခုံနားက အောင့်နေတာ အရမ်းပဲတဲ့။ အဲဒါဘာကြေင့်လဲ သိပါရစေ။
A: ဆီးလမ်းပိုးဝင်နေတာပါ။ တခြားအမေးကို တိုက်ရိုက်ပြန်ပါမယ်။ Honeymoon sickness မင်္ဂလာဆောင်စဖြစ်ရတဲ့ လက္ခဏာမျိုး ဖြစ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံဘူးခါစ မိန်းကလေးတွေ အများအားဖြင့် ဖြစ်ကြတယ်။ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာပါ။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ STD မဟုတ်ာက များတယ်။ STD လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးသောက်ပါ။ သပ်သပ်ရေးထားတဲ့စာ ရှာဖတ်ပါ။
28 Sep 10, 08:14
Q: ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခဲ့စဉ်တုန်းက ထိပ်က သုတ်ထွက်မဲ့နေရာကို လေမထုတ်ပဲ နဂိုအတိုင်း ဂေါင်းလေးအတိုင်းထားပြီး လေမထုတ်ပဲ သုံးမိရင် ဘာဖြစ်တက်ပါသလဲဆရာ။
A: ကွန်ဒွမ် ထိပ်က လေမထုတ်ပေမဲ့ ကျွတ်ထွက်တာ၊ ပေါက်ပြဲတာ မဖြစ်ရင် ကာကွယ်ရာမှာ ထိရောက်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။
Sep 28, 2010 at 1:00 AM
Q: ကျမ ပြီးခဲ့တဲ့ August လ7ရက်နေ့မှာ ရာသီလာပါတယ်။ ကျမအမျိုးသားနဲ့ September လ 23 ရက်နေ့ နှင့် 26 ရက်နေ့မှာ ဆက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ သုတ်ကို အပြင်မှာ လွှတ်ပါတယ်။ ကျမစိတ်ထဲမှာ သိပ် မသေချာသလို ခံစားနေရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့လဲ မဖြစ်နိုင်သေးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ အခုနေနေတာက (့) နိုင်ငံမှာပါ။ ဒီတော့ ဒီမှာ ဝယ်နိုင်မယ့် ဆေးမျိုးရှိရင် သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။
A: ထင်တာ မမှားနိုင်ဘူး။ သုတ်ရည်ကို အပြင်မှာ ထုတ်ပေမဲ့ တကယ်မပြီးခင် ကြာစေအောင် ထိန်းတဲ့အခါ နဲနဲဖြစ်ဖြစ် သုတ်ထွက် လာတတ်တယ်။ Emergency contraceptive (EC) သုံးရလိမ့်မယ်။ (၁) ဟော်မုန်းပါသောဆေး နဲ့ (၂) သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်ခြင်း (IUD) နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
(၁) Levonorgestrel ဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေး
Emergency contraceptive pills (ECPs) သို့မဟုတ် ဟော်မုန်းပါသောဆေးကို လိင်ဆက်ဆံပြီး မြန်မြန်သုံးလေ စိတ်ချရလေ ဖြစ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံအပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း သုံးရင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ၅ ရက်အထိလည်း သုံးနိုင်တယ်။
ဆေးနာမည်တွေက နိုင်ငံအလိုက် အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Morning-after Pill, Plan B စသဖြင့် ခေါ်တယ်။ Pill 72 (India), i-pill (India), E Pills (India), ECee2 (India), Postinor (Thailand), Madonna (Thailand)
၈၉% ထိရောက်တယ်။ RU486, Mifestone, or Mifeprex တို့လို သားပျက်စေတဲ့ဆေး မဟုတ်ဘဲ သန္ဓေ မတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း။ နေမကောင်း ဖြစ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်သား တင်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။
လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အရေးပေါ် ဆေးအပြင် အခြား နည်းများကိုပါ သုံးဘို့လိုတယ်။
(၂) သားအိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်ခြင်း (IUD/IUCD) လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း သုံးနိုင်တယ်။ ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ တာရှည် ကာကွယ်တယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း တယောက်က မကြာခဏ ချောင်းဆိုးတယ်။ နည်းနည်း အေးလာတာနဲ့ ဆိုးတယ်။ သူ အရင်က ရေချိုးရင် နည်းနည်းကြာတယ်။ ဆေးခန်းပြရမှာလည်း ကြောက်တော့ ချောင်းဆိုးရင် ဆေးလေးဘဲသောက် ပြီးနေတယ်။ ပျောက်သွားရင် မသောက်တော့ဘူး။ မကြာခဏ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးလည်း၊ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ရှောင်ရမလည်း၊ ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုဆေးတွေ သောက်သင့်သလည်း။ သူငယ်ချင်းက မိန်းကလေးပါ။ နောက်တခုက သူ့ မျက်လုံးတွေဟာ ငိုရင် မျက်ရည် မထွက်ဘူး။ မျက်ရည်ထွက်တဲ့နေရာ ပိတ်နေတယ်လို့တော့ ပြောတယ်။ မျက်ရည်မထွက်တော့ သူငိုတဲ့အခါတိုင်း ခေါင်းမှုး၊ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်လို ဆက်လုပ်သင့်လည်း သိပါရစေချင်ဗျာ။
ဖြစ်နေတာ ၂ မျိုး။
မျက်ရည်လမ်း ပိတ်တာကို ဆေးကြောနည်းနဲ့ ရတတ်တယ်။ ဆေးထိုးအပ်-ပြွန်နဲ့ လမ်းဖွင့်ပေးရတာပါ။
ချောင်းဆိုးတာ ကြာတယ်၊ ခဏခဏ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဆေးစစ်ရမယ်။ Chest specialist အထူးကုရှိရင် ပြပါ။ Physician အထူးကုကိုလဲ ပြနိုင်ပါတယ်။ အနဲဆုံး ဆရာဝန်တဦးဦး ပြပါ။ အာခေါင်ကနေစ စစ်ရမယ်။ လည်ချောင်း၊ နောက်ဆုံး အဆုပ် စစ်ရမယ်။ ဓါတ်မှန် ရိုက်ဘို့ လိုချင်လိုမယ်။ သလိပ်စစ်တာ ခိုင်းချင်ခိုင်းမယ်။ ချောင်းဆိုး-ပျောက်ဆေး အားမကိုးပါနဲ့။ ပိုးသေတာ မပါဘူး။ အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖါးကောက်သလို ဖြစ်နေမယ်။ ဘယ်မှ မသွားနိုင်သေးသူဆိုရင် Amoxacylin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၄-၅ ရက်သောက်ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:05 PM